स्मार्ट आईट ब्यानरको साथ तपाईंको आइट्यून्स पोडकास्ट प्रचार गर्नुहोस् Martech Zone
यदि तपाईंले कुनै विस्तारित अवधिको लागि मेरो प्रकाशन पढ्नुभयो भने, तपाईंलाई थाँहा हुन्छ कि म एक एप्पल फ्यानब्व्या हुँ। यो साधारण सुविधाहरू जस्तै म यहाँ वर्णन गर्न गइरहेको छु जसले मलाई उनीहरूको उत्पादनहरू र सुविधाहरूको कदर गर्दछ।
तपाईंले सायद याद गर्नु भएको छ कि जब तपाईं सफारीमा आईओएसमा साइट खोल्नुहुन्छ जुन व्यावसायहरूले उनीहरूको मोबाइल अनुप्रयोगसँग प्राय: प्रचार गर्दछ स्मार्ट अनुप्रयोग ब्यानर। ब्यानरमा क्लिक गर्नुहोस्, र तपाईं सिधै App Store मा लगियो जहाँ तपाईं अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक उत्कृष्ट सुविधा हो र यो गोद बढाउनको लागि साँच्चिकै राम्रोसँग काम गर्दछ।
के तपाईंले महसुस गर्न सक्नुहुन्न स्मार्ट अनुप्रयोग ब्यानर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईंको पोडकास्ट प्रचार गर्नुहोस्! यहाँ कसरी काम गर्छ भन्ने छ। हाम्रो पोडकास्टका लागि हाम्रो लिंक हो:
हाम्रो यूआरएलबाट संख्यात्मक पहिचानकर्ताको प्रयोग गरेर हामी हाम्रो साइटमा हेड ट्यागहरू बीच निम्न मेटा ट्याग थप्न सक्दछौं।
अब, आईओएस सफारी आगन्तुकहरूले मोबाइल वेबसाइटमा तपाईंको वेबसाइटको भ्रमण गर्ने क्रममा, उनीहरूले ब्यानर प्रस्तुत गरेका छन् जुन तपाईं माथि हाम्रो साइटमा देख्नुहुन्छ। यदि तिनीहरूले त्यसमा क्लिक गरे भने, तिनीहरू सिधा सदस्यता लिन पोडकास्टमा ल्याइनेछन्।
म साँच्चिकै इच्छा गर्दछु कि एन्ड्रोइडले पनि त्यस्तै दृष्टिकोण अपनाए!
टैग: अनुप्रयोग ब्यानरस्याऊItunesमार्केटिंग पोडकास्टपोडकास्ट ब्यानरसफारीस्मार्ट अनुप्रयोग ब्यानरस्मार्टबानर